စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on March 27, 2014 at 17:15 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ ကျောင်းသားအများစုက ကြောက်ကြတဲ့ အပြောစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲများ (Speaking exams) ဖြေဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရာတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ အကြံပြုချက်များကို တင်ပြမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီအကြံ ပြုချက်တွေဟာ သင့်ကို ဘယ် speaking exam မှာ မဆို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် အကူအညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ စာမေးပွဲတွေမှာ အထူးသဖြင့် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲတွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှား တတ်ကြတာ ဓမ္မတာပါ။ ယခုဖော်ပြမဲ့ အကြံပြုချက်တွေကတော့ နှုတ်ဖြေ ဖြေတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိအောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးကို သိပေမဲ့ မမှတ်မိဘူးဆိုရင် တခြားနည်းဖြင့်ပြောပါ။ ဥပမာ - သင့်အနေဖြင့် “expensive” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သိပေမဲ့ “cheap” ကို မသိရင် အောက်ပါကဲ့သို့သော တခြားနည်းဖြင့် ပြောပါ။
It’s not expensive. (ဒါကတော့ ဈေးမကြီးပါ။)
It’sagood price. (ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပါတယ်။)
It’s notalot of money. (ငွေအများကြီး မကျပါဘူး။)
မေးခွန်း (သို့) သင်ဘာလုပ်ရမည် ကို နားမလည်ပါက ဆရာကို မေးပါ။ မေးတဲ့အခါမှာ “Could you repeat that, please?” (ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်တစ်ခါ ပြန်ပြောပြပါလား?) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ထားရမဲ့ နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကတော့ စာစစ်သူတွေဟာ ဂြိုဟ်သား (aliens) တွေ မဟုတ်ဘဲ သာမာန်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီကဏ္ဍမှာတော့ speaking exam အတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းတို့ကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာစစ်သူအနေဖြင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ သင့်အပြောစွမ်းရည်သည် အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ကောင်းနေမယ် (သို့) စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ဖို့ အတွက် သိသင့်တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို သိထားလိမ့်မယ်ဆိုပြီး မျှော်လင့်ထားမှာ မဟုတ်ပါ။
သို့ရာတွင် သိသင့်တဲ့ စကားလုံးအားလုံးကို မသိထားရင်တော့လည်း ဒီလိုအခြေအနေမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကို ပြောနိုင်ဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်မှုတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်။
တိကျတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို မသိတဲ့အခါ မမှတ်မိနိုင်တဲ့အခါ စိတ်မပူပါနှင့်။ ဒီစကားလုံးမပါဘဲ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါသေးတယ်။ အခုဖော်ပြမဲ့ နည်းလမ်းတွေက အသုံးဝင်ပြီး ဒေသခံစကားပြောသူတွေကတောင်မှ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ surgeon (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မမှတ်မိပါက ပိုပြီး ယေဘုယျကျတဲ့ doctor (ဆရာဝန်) ဆိုတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ cutlery (စားပွဲတင်ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ ပန်းကန်ပြား စသည်) တို့ကို မေ့နေရင် ၄င်းအစား knife (ဓါး)၊ fork (ခက်ရင်း) နှင့် spoon (ဇွန်း) ဆိုပြီး တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အမည် စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - သင့်အနေနဲ့ briefcase (ရုံးသုံးလက်စွဲအိတ်)ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မေ့နေပါက “It’sathing that people use to carry papers to work” (အဲဒါကတော့ စာရွက်စာတမ်းတွေထည့်ပြီး ရုံးကို သယ်သွားတဲ့အရာ ၀တ္ထုဖြစ်ပါတယ်)လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့် “scissors” (ကတ်ကြေး) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက အောက်ပါ ၀ါကျပုံစံဖြင့် သရုပ်ဖော်ပြောပြ နိုင်ပါတယ်။
“Tiny” (အလွန်သေးကွေးသော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မေ့နေပါက “very small" (အလွန်သေးငယ်သော) ဟူ၍ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ နာမ် (nouns) တွေနှင့် နာမ၀ိသေသနများ (adjectives) အတွက် အလွန်သင့်တော် ပါတယ်။
Weak (အားနည်းသော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသိပါက “not strong” (မသန်မာသော)ဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်း ကလည်း adjectives တွေနဲ့ အထူးဆီလျော်ပါတယ်။